मौलापुरलाई प्रदेश नं २ कै नमूना नगर बनाउने योजना छ | गृहपृष्ठ
Home विकास मौलापुरलाई प्रदेश नं २ कै नमूना नगर बनाउने योजना छ
on: १३ असार २०७५, बुधबार ०८:१७ विकास
मौलापुरलाई प्रदेश नं २ कै नमूना नगर बनाउने योजना छ
रिनाकुमारी साह, नगरप्रमुख मौलापुर नगरपालिकाका, रौतहट
नगरको विकासका लागि कस्ता योजना छनोट भएका छन् ?
मौलापुर नगरपालिकाले विशेषगरी सडकलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । ‘सडक सञ्जालको विस्तार, समग्र नगर विकासको आधार’ भन्ने नारासहित प्रत्येक घरलाई व्यवस्थित सडकसँग जोड्ने लक्ष्य छ । यस नगरका टोल टोलमा सडक पुर्‍याउने र उक्त सडक मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने योजना छ । त्यसका लागि ३ करोड बजेटसमेत छुट्ट्याइएको छ । नगरलाई नै धूँवामुक्त बनाउने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । धूँवारहित नगर बनाउन प्रत्येक घरधुरीमा ग्यास सिलिण्डर तथा चुल्होे वितरण गर्न लागिएको छ । नगर क्षेत्रका करीब ४ हजार घरधुरीलाई ग्यास सिलिण्डर र चुल्हो बाँड्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको हो । त्यस्तै, खुला दिसामुक्त बनाउन विपन्न परिवारलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई रौतहटको पहिलो खुला दिसामुक्त नगर घोषणा गर्न सफल भएका छौं । आगामी असार मसान्तभित्र साक्षर नगर घोषणा गर्ने योजना छ । त्यसका लागि प्रौढ शिक्षा अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौं । यस नगरमा बसपार्क, पोलिटेक्निक कलेज, मालपोत कार्यालयको भवन, शहरी विकासका लागि ल्याल्डपुलिङ निर्माणलगायत योजना पनि छनोटमा छन् ।
विशेष प्राथमिकताको योजना सडक नै हो । सडक भएपछि उत्पादित वस्तुको बजाररीकरणमा स्थानीय बासिन्दालाई सजिलो हुन्छ । त्यसैले, टोल टोलमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएका छौं । हरेक टोलमा पक्की सडक पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत काम भइरहेका छन् । टोल टोलबाट विकासको काम थालिएकाले गाउँ हुँदै समग्र नगर नै विकसित हुनेछ । यसबाहेक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत पूर्वाधार विकालाई पनि नगरपालिकाले महत्त्व दिएको छ ।
तपाईं प्रदेश नं २ कै एक्लो महिला नगरप्रमुख हुनुहुन्छ । काम कारबाहीमा असहज महसूस गर्नुभएको त छैन ?
नगरपालिकाको काममा समान्यबाहेक कुनै किसिमको असहजता भएको छैन । मुलुकमा महिला राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता उच्च पदमा महिलाको नेतृत्व भएको अवस्थामा नगर प्रमुखको जिम्मेवारी महिलाले पाउनु आश्चर्य भएन । महिलाले पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । नगरलाई प्रदेश नं २ कै नमूना बनाउने योजना छ । त्यसपछि नगरवासीले सबै क्षेत्रमा विकासको अनुभव गर्नेछन् ।
नगरपालिकाको पञ्चवर्षीय योजना कस्ता छन् ?
निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । ‘मौलापुर नगरपालिकाको समृद्धिको आधार : कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ विभिन्न योजना छनोट गरिएका छन् । यी योजनामार्फत नगरलाई समृद्ध नगर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । खासगरी सडक सञ्जाललाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने, गुणस्तरीय खानेपानीका लागि ‘एक घर, एक धारा’, ‘स्वच्छ शहर, हमर नगर’को नारा अवलम्बन गर्दै प्रत्येक घरमा नाला र ‘एक घर, एक रूख’ कार्यक्रम सञ्चालन, सय शय्याको अस्पताल निर्माण, ‘एक घर, एक रोजगार’ मान्यताअनुसार प्रत्येक घरबाट एकजनालाई शीपमूलक व्यावसायिक शिक्षालगायत योजना छन् ।
स्थानीय तहमा नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या पनि छन् कि ?
स्थानीय तह सञ्चालनमा एकदमै समस्या छन् । कतिपय काम नीतिगत समस्याका कारण पनि हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयले समस्या हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको भए तापनि प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेको छैन । धेरै कानून बाजिएका छन् । त्यसबारे पनि स्थानीय तहमा अन्योल छ । यता, स्थानीय तहमा सबै प्रकारका कार्यालय आउन थालेका छन् । ती कार्यालयको व्यवस्थापनमा पनि धेरै कठिनाइ छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको अभावले विकास निर्माणका काम चुस्त हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याले नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा असर पारेका छन् ।
प्रस्तुति : दीपेश पौडेल